लुकाउँन खोज्दा खोज्दै गोप्य सुचना चुहिए पछि गटबन्धनमा हलचल ! – GALAXY
लुकाउँन खोज्दा खोज्दै गोप्य सुचना चुहिए पछि गटबन्धनमा हलचल !
सर्वोच्च अदालतको परमादेश बाट बनेको देउवा सरकारको सत्तासाझेदार गठबन्धनमा लुकाउँन खोज्दा खोज्दै चुहिएको सुचनाले हलचल मच्चिएको छ ।
सत्तागठबन्धनमा पाँच दल भनिए पनि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमरेशर राणाले पनि भाग खान थाले पछि एक दल थपिएको आरोप लागीरहँदा गठबन्धनले फेरी प्रधानन्यायाधिश राणालाई विवादमा ल्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमरशेर जबराले मन्त्रीपरिषमा भाग खाएर पनि विवाव भइसकेपछि उनका जेठान गेजन्द्र हमालले मन्त्री पद बाट राजिनामा दिइसकेका छन् । यहि विचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा सँग गोप्य भेट गरका छन् ।
मध्यरातमा राणा निवासमै भएको भेटलाई निकै अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । गोप्य भनेर प्रचण्ड सुटुक्क गएर राणालाई भटेका थिए तर सुरक्षा स्रोतबाट उक्त खबर बाहिरिए पछि अर्को तहल्का मच्चिएको छ । चोलेन्द्रका जेठान मन्त्री हुँदा काग्रेस कोटा बाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रचण्ड बचाउमा उत्रिएका थिए ।
प्रचण्ड राणा निवासमा छिर्नु अघि त्यसअघि बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु शेरवहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल,डा‍। बाबुराम भट्टराईलगायतको छलफल चलेको थियो । शीर्ष नेताको छलफलपछि प्रचण्ड एक्लै प्रधानन्यायाधीशको निवासमा गएको बताइएको छ ।